रुपन्देहीमा विवाह गर भन्दा प्रेमिकाकाे हत्या ! – Nepal Trending
रुपन्देहीमा विवाह गर भन्दा प्रेमिकाकाे हत्या !
On २० जेष्ठ २०७६, सोमबार २२:३३
बुटवल : रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका १ मा बैशाख ३१ गते मृत अवस्थामा फेला परेकी १८ वर्षीया सवनाम निशाको आफ्नै प्रेमीले हत्या गरेको खुलेको छ। जेठ १ गते बिहान घरनजिकै सुख्खा खोलामा मृत अवस्थामा भेटिएकी निशालाई आफ्नै प्रेमी २१ वर्षीय असरुद्धिन मुलमानले हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी उपरीक्षक हृदय थापाले जानकारी दिए।
घटनामा तीन जनाको संलग्नता रहेको प्रहरीको भनाई छ। घटनाका मुख्य अभियुक्त मृतकका प्रेमी मुसलमान र सहयोगी अस्लाम मुसलमानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अर्का एकजना फरार रहेका छन्। हत्याका मुख्य अभियुक्त मुसलमानलाई नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा लुकिबसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
निशालाई गत बैशाख ३० गतेराति मुसलमानले आफैले बोलाई हत्या गरी खेतको सुख्खा कुलोमा फालेका थिए। मृतक सवनम निशाको अर्का ब्यक्तिसँग विवाह गर्न घर परिवारले निर्णय गरेसँगै आफ्नै प्रेमी मुसलमानलाई विवाह गर्न दवाव दिँदै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले बतायो।
मृतककले विवाहका लागि पटक पटक दवाव दिए पनि प्रेमीले भने विवाह गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए। तर अन्तिममा भने विवाह गर्ने भनेर राति बोलाई घरदेखि ४०० मिटर टाढा लगेर सलले घाँटीमा बेरी हत्या गरेको प्रहरीको भनाई छ। बैशाख ३० गते राति हत्या गरी लास छोपेर राखी ३१ गते राति अर्को स्थानमा लगी फालेको अवस्थामा जेठ १ गते बिहान शव फेला परेको थियो।